पूर्वयुवराज पारस चढेको गाडी ले ठ,क्कर दिदा बाछाको मृ,त्यु – PathivaraOnline
Home > समाचार > पूर्वयुवराज पारस चढेको गाडी ले ठ,क्कर दिदा बाछाको मृ,त्यु
पूर्वयुवराज पारस चढेको गाडी ले ठ,क्कर दिदा बाछाको मृ,त्यु
admin May 23, 2020 समाचार	0
पूर्वयुवराज पारस शाहलाई शुक्रबार मध्यरातमा छाती दुख्यो। उनले आफ्ना सहयोगीलाई ‘चेष्ट पेन’ भएको बताए। शाहका सहयोगीले उनलाई अस्पताल लैजान कोठाबाट निकाले। शाह लेकसाइडको खपौंदीस्थित अपार्टमेन्टमा बस्छन्। शाहलाई कोठाबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लैजाँदै गर्दा गाडी दुर्घटनामा पर्‍यो।
शाह चढेको बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडीले पोखराको पृथ्वीचोकमा बाच्छालाई ठक्कर दिएको हो। गाडीको ठक्करले बाच्छा घटनास्थलमै मरेको छ।गाडी दुर्घटना भएपछि प्रहरीले सवारी चालक अशोक गुरुङ र गाडी नियन्त्रणमा राखेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले सेतोपाटीलाई बताए।
चालक गुरुङ पारसका सहयोगी भएको प्रहरीले जनाएको छ। गाडीमा चालकसहित ३ जना थिए। जसमध्ये एक जना स्वास्थ्यकर्मी नै भएको एसपी कार्कीले बताए। दुर्घटनापछि पारसका सहयोगीले अर्को गाडीमा राखेर उनलाई अस्पताल लगेका थिए।
अस्पतालले शाहको स्वास्थ्य परीक्षणपछि अवस्था सामान्य रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो। पूर्वयुवराज पारस झण्डै ९ महिनादेखि पोखरामा बस्दै आएका छन्। उनले लकसाइडको खपौंदी क्षेत्रमा २ पटक गरी झण्डै डेढ सय जनालाई राहत वितरण गरेका थिए।
नेपाली चेली मनिषा कोईरालाको समर्थन गर्दै बाहिरियो यस्तो गीत – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
कोरोनाबाट मृ,त्यु भएकी महिलाको शिʼशुलाई पूर्वमन्त्री बस्नेतको १ लाख सहयोग
विमानस्थलमा कडाइ गर्न लागेपछि परदेशी दाजुभाईको हितमा सरकार बिरुद्ध यसरी उत्रिईन् नायिका रेखा थापा…
भर्खरै गोरखाबाट आयो सबैलाई रुवाउने खबर
‘जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी गाउँवाट लखेट्ने बिप्लपको घोषणा ( पूरा हेरि शेयर गरौ)
सिमा अतिक्रमणबारे अहिलेसम्मकै वास्तविक खुलाशा! राष्ट्रवादीहरू भन्नेहरूले हेर्ने पर्ने भिडियो एकपटक अवस्य हेर्नुस्
रेकर्ड ब्रेकिङ, आज मात्रै कोरोन सँक्रमितकाे सँख्या २२६ ले बढ्यो
दाङमा फेरि अर्काे घटनाः किरिया बसेकि आमाको बिलौना, साथीले नै यस्तो गरे… त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको भाग्य यस्तो? (भिडियो सहित)
दुःखद खबरः कोरोनाकै कारण युएईमा १८ नेपालीकाे ज्यान गयो!
१३ वर्षमै एकल बनेकि रीताकाे यस्तो छ दुःखद कहानी, एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला!